Inde: Onjan’ny famonoan-tena ao amin’ny tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2009 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, bahasa Indonesia, English
Faharoa eran-tany i Inde amin'ny firenena be mponina indrindra miaraka amin'ny olona 1.2 lavitrisa ary mipetraka any ambanivohitra ny 70% amin'ireo mponiny. Mihoatra ny Indiana 456 tapitrisa (42% amin'ny mponina) no latsaka ambanin'ny $1.25 isan'andro tsipiky ny fahantrana maneran-tany . Na dia 28% amin'ny GDP isan'andro aza ny sehatry ny fambolena, ampahany betsaka amin'ny olona no ao anatin'ity sehatra ity na izany tantsaha na any amin'ny raharaha hafa. Indrisy anefa fa nisy aretim-be nahazo ny tantsaha Indiana. Nihanahazo vahana tsikelikely teo amin'ny tantsaha ny fandraisana fepetra hentitra toy ny manala ny ainy faobe mba hialana amin'ny tsindry mafin'ny trosa sy ny fahantrana ary nanomboka nitranga tsikelikely izany isan-taona .
Nampahafantatra i Devinder Sharma, mpandalina nyara-tsakafo sy ny politika ara-barotra any Inde ao amin'ny blaogy Ground Reality, hoe:
tantsaha 60 no namono tena ny volana Jolay (2009). Tamin'ny 10Aogositra,16 hafa no nanala ny ainy. Miseho foana izany zava-maha-valalanina izany any ambanivohitra na dia eo aza ny hamaroan'ny komity, ary manamafy hatrany ny hamaroan'ny famonoan'olona ny fepetra noraisina izay asehon'ny mpanao politika sy ny manam-pahaizana eo an-tanàna. Ny tena loza dia tsy misy olona mirotsaka mijery ny tena antony mahatonga ny tsy fisian'ny fiafaran'ity hirifirin'olombelona ity.
Ary fa maninona no mamono tena ireo tantsaha ireo? Manazava , i Nita J. Kulkarni mpanao gazety mahaleotena ao amin'ny blaoginy Ny fahitana an'i Inde amin'ny zoro lehibe [A Wide Angle View of India]:
Nidi-trosa ny tantsaha noho ny fitambaran'ny fidangan'ny saram-pitrandrahana, ny masomboly hibrida lafo loatra (lazaina fa ahazoana vokatra betsaka) sy ny fanafody famonoana voalavo amidin'ireo orinasa lehibe maneran-tany, sy ny hamoran'ny vokatr'izy ireo, nateraky ny fanafarana entana. Nanampy trotraka ny fahorian'izy ireo ihany koa ny haintany. Lafo loatra ho an'ny tantsaha ny fitarihan-drano nefa ny governemantam-panjakana tsy manampy.
Mitantara ny tsy fetezan'ny fandrindrana asa vonjytaitran'ny governemanta ny mpampiasa blaogy Indiana S Gupta .
i Sonia Faleiro, mpanao gazety nahazo loka sady mpanoratra avy any Inde manazava hoe ahoana no naharaikitra ny mpamboly landihazo any amin'ny faritry Vidarbha ao amin'ny fanjakan'i Maharashtra amin'ity honahonan'ny trosa ity rehefa tsy misy fanampiana avy amin'ny fanjakana.
Voly iray tojo aretina ohatra, na hadisoana teo amin'ny fividianana masomboly ratsy dia manosika hindrana vola. Dimy isan-jaton'ny tantsaha ihany no afaka miditra amin'ny fampindramam-bola avy amin'ny kaoperativa sy ny banky, matetika noho ireo antony ireo. Ny ambiny dia tsy maintsy miditra amin'ny mpampanjana-bola tsy miankina, izay matetika mpampindrana masiaka ka maka zanany eo amin'ny Rs 500 isaky ny efa-bolana amin'ny vola Rs 1,000 indramina.
Manomboka tsy zaka intsony ny vesatry ny trosa, mamono tena ny tantsaha raha vao misy tsy fihetezana kely avy amin'ny zava-boahary.
Nanoratra i Vikasho ao amin'ny blaogin'ny Associación Prabhat, fikambanana tsy mitady tombony voarakitra any Espàna sy Inde miasa mba hampiely sy hanampy ny ezaka fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina any amin'ireo toerana lavitra andriana any Inde. Tohina izy noho ny tsy fihetsehan'ny governemanta sy ny tsy fahampian'ny firaharahian'ny hafa:
Raha te hamaha ny olan'ny tantsaha ny governemanta, maninona no tsy nomena fanampiana manokana izy ireo tao aorian'ny haintany na ny tondra-drano ( matetika mihitsy any Bihar ). Maninona no lavina ny tantsaha any amin'ny faritra maro amin'ny firenena eny fa na ny zo ara-dalàna hanao findramam-bola amin'ny banky misahana varotra aza… Maninona no tsy msy olona miresaka ny tsy fahampiana ara-tsakafo sy ny hanoanana any amin'ny faritra maro any Inde (mipetraka amina faritra vitsivitsy any Inde ny 25% n'ny mahantra sy noana eran-tany) ?
Maninona no tsy misy vaovao mikasika ny famonoan-tena misoko miadana eo amin'ny tantsaha izay mitranga matetika any amin'ny faritr'i Inde?
Eritreretiko mihitsy hoe sahirana amin'ny fivoarana ara-toe-karena i Inde ary te-hiaina fotsiny anaty nofinofy hoe efa manakaiky ny tontolo mivoatra (ary tsy misy izany 25% n'ny mahantra eran-tany izany mipetraka any Inde).
i Harini Calamur , mpamokatra horonantsary Indiana, mpampianatra, mpanoratra sady mpitoraka blaogy dia naneho hoe ahoana no tsy ahalalàn'ny haino aman-jery ny ratran'ny tantsaha mitondra azy ireo any amin'ny famonoan-tena, raha oharina amin'ny hamaroan'ny rako-baovao mahakasika ireo olo-malaza:
Ny andro nitazonana an'i Shahrukh Khan nandritry ny adin'ny roa [..] tantsaha 21 no namono tena tany Andhra Pradesh satria tsy afaka nanefa ny trosany .
Kanefa tsy afaka tohanana ny famonoan-tenan'ireo tantsaha, tsy mampitombo ny TRP izany ary tena tsy fotoanany velively hiatrehana resaka mamaivay ho an'ireo antsointsika hoe ‘mpanao gazety’.
i Himanshu Rai , manampahaizana amin'ny informatika sady mpampiasa blaogy, dia manasongadina ihany koa ny fanatsongatsongan'ny Indiana ny olan-dry zareo:
Nitarika fahabangana lehibe eo amin'ny modelin'ny fivoarana ny fitombon'ny elanelana eo amin'ny sehatra an-tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra. Ny tena mahatsikaiky dia tsy misy olona miraharaha ny mahantra mihitsy na ny filàna fiovana marina.
Ny olona manana fari-piainana antonony, izay latsaky ny 5%n'ny mponina, no mahazo fanrakofana mediatika mihoam-pampana. Ny fampiatoana mpiasa any amin'ny orainasa fitaterana an'habakabaka no mavesa-danja kokoa noho ny famonoan-tena faobe ataon'ny tantsaha eto amin'ny firenentsika
Tatitra farany avy amin'ny Navdanya Trust, vondrona fampielezan-kevitra Indiana, hoe “ maro kokoa amin'izao fotoana izao ny olona noana any Inde noho ny any Afrika Atsimon'i Sahara. Ary ny olona tena faran'izay noana ao dia ny mpamokatra – ny tantsaha”.
Nanohitra ireo tantsaha. Nefa ny hany fitaovan'izy ireo dia ny famonoan-tena. Efa-taona aty aorian'ny haintany, tantsaha 5,000 any amin'ny fanjakan'i Inde ao Jharkhand no nanao sonia ny dinan'ny famonoan-tena ary mitaraina fa tsy nanao dingana iray akory ny governemanta mba hampivoatra ny toe-piainany.
Nanakiana izany ny filozofa Indiana i Vandana Shiva, mafana fo mpiaro tontolo iainana, mpahay toe-karena mpiaro ny vehivavy ary mpanoratra, amin'ny lafiratsin'ny toe-karena eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fanatontoloana. Na izany aza, miaraka amin'ny tahan'ny tsy fisian'ny asa mihoatra ny 7% , tsy afaka ny hahita asa mba hivelomana mihitsy ny tantsaha.
Maneho ny ratran'ny tantsaha Indiana ny Mitti, fanadihadiana fohy novokarin'ny mpanao horonantsary tsy matihanina, Vibhu Mohunta sy Ashish Dhadade.
Mpanao gazety indiana iray miompana amin'ny fandrosoana iray nahazo ny loka, i P. Sainath tao amin'ny Counterpunch no maneho fa mirongatra izay tsy izy ny fahantrana sy hanoanana eo anivon'ireo tantsaha Indiana:
Mpividy mivantana ny voan-tsakafo ny tantsaha Indiana an-tapitrisany kely sy madinika. Tsy mahavita mamokatra betsaka ampy hahavelona ny fianakaviany ry zareo ary mila miasa amin'ny tanin'ny hafa sy any an-toeran-kafa mba hamenoana ny banga. Tena tohana mafy amin'ny halafon'ny vidin'ny sakafo izy ireo noho izy ireo tsy maintsy mividy ny masomboly ilainy eny an-tsena, toy ny niseho tamin'ny 1991, ary indrindra ny tamin'ny voalohandohan'ity taona ity. Tena zava-misy marina ny hanoanana eo anivon'ireo mpamokatra ny sakafo. Fanampin'izany, nidina tsy misy hoatr'izany ny “masonkarena isam-batan'olona” eo amin'ny voan-tsakafo teo amin'ny tantsaha Indiana vantany vao nanomboka ny “fanovàna” : nanomboka 510 grama isaky ny Indiana tamin'ny 1991, lasa 422 grama tamin'ny 2005. (tsy fatiantoka 88 grama izany. Fatiantoka 88 ampitomboina 365 ary avy eo amin'ny Indiana iray lavitrisa.) Nasongadin'i prof. Utsa Patnaik, manam-pahaizana ara-toe-karena eo amin'ny fambolena fa eo amin'ny latsaky ny 100 kg ny salan'isa isam-pianakaviana mahantra amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny tamin'ny folo taona lasa.
Hitohy hijaly foana ny tantsaha Indiana mahantra raha mbola misy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanana ny rano madio, hoy ny fanazavan'i Suvrata Kher manam-pahaizana momba ny tany. Manampy trotraka ny fahantran'izy ireo ihany koa ny tsy fisian'ny findramam-bola mora sy malalaka toy ny findramam-bola antonony sy ny tsy fisian'ny safidy amin'ny masomboly na ny tranga mety hahazoana tombony. Miraikitra amin'ny kodiaran'ny fahantrana sy ny loza voajanahary toy ny haintany izy ireo izay mandetika azy anaty lozoka. Mihevitra i Sanjeev Sanyal, mpahay ara-teo-karena sy ara-tontolo iainana, fa mila mihevitra ifotony ny sehatra ara-pambolena i Inde hampitsaharana an'ireo fahafatesanaireo.